I-Cook Islands I-Offshore Assets Trust Trust
I-Cook Islands Trust ibonelela ngamandla kukhuseleko lweeasethi kwihlabathi liphela. Ifumaneka kumazantsi eHawaii, iziQithi zikaCook zingqine ixesha nexesha ukuphinda zibe nembali yomthetho wokukhuselwa kwempahla. Ityala ngalinye ekucelw 'umngeni kulo, ii-asethi zomthengi zikhuselwe. Nanku umzekelo. Ngowuphi umntu onamandla ongaba ngumchasi wezomthetho? Uninzi lunokuthi Urhulumente waseUnited States. Kwakukho amatyeli amabini apho urhulumente wase-US wazama ukwaphula ukuthembana. Kuzo zombini iimeko, urhulumente ulahlekile kwaye ii-asethi zahlala zikhuselekile kwi-trust.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ngekhe ngabom simisele itrasti yokhuselo lweeaseti ukugcina iimpahla zikude noRhulumente wase-US. Ke ngoku siphawula inyani ukubonisa amandla esi sixhobo somthetho. Yiyo loo nto, singangxameli mntu kufuneka asebenzise imoto enje ngale ndlela.
Isebenza njani iTrust Islands
Nantsi indlela esebenza ngayo i-Cook Islands Trust Trust. Umchasi wakho kwezomthetho ucenga inkundla ukuba inyanzelise ukuba, "Yijikelezise imali." Ngenxa yoko, ngokubambisana, bhalela le letrasti ileta uyazisa ukuba iyalelwe ukuba ibuyise imali. Ugcina ikopi yeleta kunye nenombolo yokulandela umkhondo kwaye ubonise ijaji oyithobileyo. Itrasti, kwelinye icala, iyafuneka ukuba ithobele imiyalelo ebhalwe kwiCoke Islands Trust. Kukuthenjwa kwempahla. Ke, sifaka u- “duress clause” kwi-trust. Isolotya lithi lo mntu uliphetheyo uyenqatshelwa ukukhupha imali xa umxhamli enyanzelwa ukuba enze ngokomyalelo wenkundla.
Ngale ndlela itrasti, ehlala ngaphandle kwelizwe lakho kwaye engaphandle kwenkundla yakho, ayiyi kubambisana. Ukhuselekile ekonakaleni kuba uyithobela ngokupheleleyo imiyalelo yejaji. Oko kukuthi, ucele umphathiswa ukuba abuyise imali. Ke ngoko, ukwisikhundla apho uyithobele ngokupheleleyo imiyalelo yejaji. Itrasti, nangona kunjalo, ayizange, oku kukhuselo olusemthethweni olusebenzayo.
Sebenzisa ukuthembela kude nonxweme kufana nomnini shishini waseka iqumrhu kwiNevada okanye eDelaware. Uyakwenza oko ngenxa yemithetho yabo ephezulu, kunokuba aseke iqumrhu kwelinye ilizwe. Ukuseta ukuthembela kwiziQithi zikaCook okanye kolunye ulawulo olufanelekileyo ukuze uxhamle kwimithetho yabo efanelekileyo kuyafana. Ngumbandela wokukhetha indawo kunye nemithetho efanelekileyo yemeko yakho.
Ndazi njani ukuba ndingayithemba intrasti yaseCook Islands?
Okokuqala, itrasti akufuneki ingenelele de kube "kubi" kwenzeke. Okwesibini, akukaze kubekho trasti othathe imali yomxhasi. Oku kungenxa yokuba urhulumente we-Cook Islands ukhetha kakhulu ukuba ngubani na ovumela ukuba abe nelayisensi yetrasti. Ngapha koko, bakhusela ngokuqatha ishishini labo leenkonzo zemali. Ezi zixhobo zomthetho zingumthombo omkhulu wengeniso kwingingqi. Ke, abaphathiswa banelayisensi, baphicothwa rhoqo kwaye babekwe esweni. Okwesithathu, inkampani ye-inshurensi ibophelela ama-trustee, ke imali kwi-trust yakho ihlawulwe kwi-inshurensi. Ngapha koko, hlala ukhumbula ukuba useka esi sixhobo somthetho sokukhusela ii-asethi ngokuchasene nokuchasene nomthetho ongalunganga.
Ke, ngaba ungathanda ukuba ube ne-100% ithuba lemali yakho ithathwe ziinkundla? Okanye ungathanda ukuba ube nephepha-mvume lokugcina imali elinelayisensi, kunye ne-bonded, ongazange uthathe imali yomthengi wenze oko ubabhatalele kona: ukukhusela imali yakho. Kwaye, sisebenzisa inkampani ethembisayo ephantse imashumi amane eminyaka ubudala.
Ngaphambi kokuba "into embi" yenzeke, nguwe ozitsalela intambo. Ulawula iiakhawunti zebhanki, njl njl? Sakha inkampani elawula kude ityala eliselunxwemeni (LLC), kwisiqithi seCaribbean seNevis ngenxa yokuba oku kulawula ukubonelela ngokhuseleko. I-trust ingumnikazi we-100% ye-LLC. Ungumphathi we-LLC. Iiakhawunti zebhanki zibanjwa kwi-LLC. Utyikityo lwakho kwiiakhawunti zebhanki.
Ke, ukujonga kwakhona, ukuthembela kungumnikazi we-offshore LLC. Ungumphathi we-offshore LLC. Ugcina ulawulo olusayiniweyo kwiiakhawunti zebhanki.
Xa "Into embi" isenzeka
Xa "into embi" isenzeka, itrasti ingena ukukhusela kwaye ithathe indawo yakho njengomphathi we-LLC. Ke, xa uyalelwa ukuba ubuyise imali, itrasti, ohlala ngaphandle kwelizwe kwaye engabophelelanga kwiimfuno zenkundla yendawo yakho, ulinda iiakhawunti zakho.
Ukuphinda-phinda, ukhuseleko lwezezimali kunye noxolo lwengqondo yomthengi, ekuphela kwexesha apho amatrasti aqala ukuthatha amanyathelo xa iinkundla zizakuthatha imali yakho. Ke, njengoko sele kukhankanyiwe, kungcono ukubeka imali yakho kwisixhobo somthetho esikhusele imali yabathengi ngalo lonke ixesha kunokuba i-100% iqinisekile ukuba umchasi wakho wezomthetho uza kubaleka nobutyebi abufumene nzima. ?
Nje ukuba "into embi" ihambile intambo yolawulo, abaphathi be-LLC, babuyela kuwe kwaye ubuyela kwisihlalo somqhubi zonke iingxowa-mali zakho zisebenza kakuhle. Xa uphakathi kwe-duress esemthethweni, itrasti yakho inokuhlawula amatyala egameni lakho. Banokudlulisela imali kubantu obathembayo abayakuthi bakukhathalele, njl. Njl., Bathathelwa imali, kodwa abo bachasayo abanakufumana imali yabo. Iziphumo zizonke kukuba iimali ozisebenzileyo nezisebenzileyo zikhuselekile kwaye zikhuselekile.
Isixhobo sokuKhusela iiaseti zokugqibela
Ufumana kuphela ithuba elinye kulo mhlaba. Ke, ukonwabela ukhuseleko esithetha ngalo apha kufuna inyathelo lakho. Yiba nentembelo esekwe. Beka imali yakho kuyo. Sibone abathengi abaninzi besibulela ngokungazenzisiyo ngokubanceda ukuba bonwabele olu loncedo kunye nokugcina yonke into abayisebenzeleyo. Kwelinye icala, sikwabone abathengi belahlekelwa yiyo yonke into ngokuhlaziya.
Kukho amaqela anomdla anomdla kuwo, anje ngala malungu omsebenzi wezomthetho angahlawulwa ukuba ii-asethi zakho zikhuselwe, onokuzama ukukukhusela ekusekeni i-trust. Banokuzama ukukusoyikisa kwaye baxele ezinye iimeko ezinqabileyo apho ijaji ingazange ilandele umthetho apho abo bafumana izithembiso ezinjalo bekhe batyholwa. Into abangayifuni ukukuxelela yona iyimbali yonke. Kwimeko ka-Anderson, umzekelo, ukuthembela kusekwe okungalunganga. Igqwetha elaseka le trust lenze abathengi bakhe bobabini baxhamle kwintembeko kunye nabakhuseli bethemba.
Le yimpazamo yobudenge kwinxalenye yegqwetha kuba libeka umntu oza kuxhamla kwisikhundla esongeziweyo sokuba nefuthe ekutshintsheni ababambeleyo nabaxhamli. Umgwebi wathi ngenxa yokuba abo baxhamlayo nabo bakwakhuselwa, oko bazidalele ngokwabo amandla okwenza into. Iindaba ezimnandi kakhulu zokuba eli tyala yayingumbono omangalisayo ukuba kwimeko yokuthenjwa kwasekwa okungalunganga, ukuthembela kusakhusela iimpahla zabathengi.
Amatyala yinxalenye yobomi
Wonke umyezo unezimbungulu kunye nokhula. Ke, yonke igadi kufuneka inyanyekelwe. Ukungacingi njalo kuyinto engenamsebenzi. Ukugcina igadi kuthatha inyathelo. Ukukhusela iimali zakho akufani. Kuya kufuneka uthathe inyathelo lokukhusela isitiya sakho sezemali okanye iibgs zomthetho kunye nokhula ziya kuthatha indawo. Ukugcina igadi esempilweni, kufuneka isenzo.
Olona khuseleko luqilima oluthenjiswayo kukungena kwemali engamaphepha kwi-akhawunti yebhanki ekhuselekileyo yamanye amazwe. Ibhanki esetyenzisiweyo akufuneki ukuba ibe nesebe elihambelanayo ngaphakathi kwilizwe lakho. Ngokubhekisele kwiarhente yokuthenga nopkuthengisa izindlu, iinkundla zasekhaya zinokuthatha indawo yendawo yokuhlala. Ke, ukuba ngumnini wepropathi ngaphakathi kwi-LLC engumnini wentembeko kulungile. Nangona kunjalo, xa into embi iphakamisa intloko yayo embi kubhetele ukuba uthengise ngokukhawuleza ukuthengisa izindlu kunye nokukhusela imali kude nonxweme kunokuba uphulukane nepropathi yonke. Njengolunye uhlobo, umntu unokurekhoda i-lien esemthethweni ngokuchasene nepropathi kwaye atshixe imali kwi-akhawunti enjalo ngaphakathi kwesakhiwo se-trust / LLC.
Rhoqo, sibeka iitrasti zamagqwetha, athi emva koko, azithengise kubathengi bazo. Sikwafundisa iisemina zokhuselo lweempahla kumalungu ezobugcisa kwezomthetho. Ukongeza, sibeka inani lethemba lokuthenga ngokuthe ngqo kubathengi bethu. Izibonelelo zokucwangciswa kwezakhiwo zinokongezwa kwi-trust; Inguqulelo yomlenze ethi, "Xa ndisifa yonke into iya kwiqabane lam kwaye xa sisifa yonke into ihamba ngokulinganayo nabantwana, umzekelo.
Lumka umnikezeli ngenkonzo omnye kwindawo yentengiso onobuqili bokukhuthaza eyakhe intembeko ngokulahla zonke ezinye iindlela zokhuselo lweeasethi, kubandakanya nenketho esithetha ngayo apha. Ukhuthaza eyakhe intembeko yalapha ekhaya, engabambeki enkundleni, kwaye ethoba lonke ukhetho kodwa olwabo. Ngokungathandabuzekiyo, akathethi ngobuninzi beemeko ezibonisa amandla okuthenjwa kwiiCook Islands. Uxoxa kuphela ngeziganeko ezimbalwa zobungqangi apho iijaji zingazange zilandele umthetho kwaye zinike ulwimi ukubaleka kwizindlu zetrasti. Ngaphezu koko, uyadanisa kwinto yokuba ukuthembela bekukhusela iimali zabathengi ngalo lonke ixesha.
Ingxaki edadayo kukhetho alukhuthazayo kukuba intembeko yakhe yalapha ingabanjiswa njengempukane phantsi kwempumlo yejaji yendawo. Ke ngoko, ngamandla angalinganiyo aboniswe ngokuphindaphindiweyo ziiCook Islands, uninzi lwethu kwicandelo lokhuselo lwee-asethi ezingenazizathu zibuthathaka ezingaphandle zonke ziyavuma ukuba ukuthembela okuxoxwe ngokuboniswa apha, kude kube ngoku, kukhuseleko oluluqilima lwexabiso olukhoyo namhlanje.
Fowuna ngalo naliphi na ixesha, iiyure ze-24 ngosuku, ngolwazi oluthe kratya malunga nokuseta i-Cook Islands Trust, i-Nevis LLC kunye neakhawunti engaphesheya ukuze ukhusele iiasethi zakho.